I-Dnger Eco-Retreatreon Queen 2 - I-Airbnb
I-Dnger Eco-Retreatreon Queen 2
Dominical, Costa Rica, Puntarenas, Costa Rica
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguBrendan
Igumbi lethu leKumkanikazi libonelela ngokukhanya nokubona izinto eziyimfihlo ngaphezu kweNdlovukazi yethu Eqhelekileyo. Inegumbi lokuhlambela elinomnyango ophumela ngaphandle, iverandayabucala kunye nendawo yokuphumla esetyenziswa nangabanye abantu. Umatrasi omkhulu, amashiti ayi-1500, i-WiFi yasimahla, amanzi acociweyo, kunye ne-air conditioning yasimahla.
Siyindawo yeholide yeboutique, eyakhiwe kwiibhokisi zemithwalo ezihamba ngebhayisekile ukuze ilungele indalo, ikhuseleke kwaye itofotofo. Sine-studio esihle sobugcisa kule ndlu, kunye nevenkile ekhethekileyo yeboutique. Sineeklasi ze-yoga zemihla ngemihla kunye neeklasi ezahlukahlukeneyo zobugcisa, kunye nokuphulula izihlunu kunye nokukhenketha kunye nezifundo zokusefa.
Siyindawo yeholide enamagumbi ayi-12 aqeshisayo. 2 indlovukazi eqhelekileyo, 4 ukumkanikazi kunye namagumbi ayi-6 amakhulu. Jonga amanye amagumbi ethu apha kwa-Airbnb. Onke amagumbi ane-wifi, iindawo ezingaphandle komgangatho, iishelfu zegumbi, amanzi acociweyo asimahla kunye nokufikelela lula kwipuli yethu ephucukileyo, istudiyo esihle sokuhamba kunye neeklasi.
Guest have their own entrance to the property and their rooms. Guests have access to the studio from noon to 6pm when not in use for classes, massage or retreats, access to free WiFi and free filtered water, and shared deck area. Breakfast is included.
Siyindawo epholileyo nekhuselekileyo yokonwabela iDominical, istudiyo sethu se-yoga kunye neendawo ezikufutshane ukusuka e-. Onke amagumbi aneematrasi ezikumgangatho ophezulu kunye namashiti ayi-1500 ukuze abantu bathi zava. Nceda uqaphele ukuba isidlo sakusasa siqukiwe kunye nekofu kunye neti.
Siyindawo yeholide yeboutique…
Ikiti yoncedo lokuqala
4.83 out of 5 stars from 66 reviews
4.83 (iingxelo zokuhlola 66)
I-Dominical yidolophu encinci engaselwandle, ene-surf ekumgangatho wehlabathi kunye neetshona zelanga ezintle. Kukho iivenkile zokutyela ezintle eziliqela kunye neekhefi, iivenkile ezinkulu ezifanelekileyo, ibhanki kunye neyeza. Kukho izinto ezinokonwatyelwa zaphandle ezimangalisayo, ukhenketho nezinto ezinokonwatyelwa ezimele zenziwe, esinokukunceda uzilungiselele. Ngamanye amaxesha kukho ubusuku obumnandi nangona iDominical iyindawo emini.
Umbuki zindwendwe ngu- Brendan
Ujoyine nge- 2013 Disemba
Yogis and surfers and nature lovers.
Siqhelekile kwaye siyafumaneka ukuze sincede. Indawo yethu yokutyela ivulwa yonke imihla kwaye abasebenzi banokukunceda ubhukishe ukhenketho lokukhenketha, izifundo zokusefa okanye nantoni na onokuyidinga. Ngamanye amaxesha sihlala kwidesika ekwabelwana ngayo, kodwa sihlala kwindlu eyahlukileyo kwipropati.
Siqhelekile kwaye siyafumaneka ukuze sincede. Indawo yethu yokutyela ivulwa yonke imihla kwaye abasebenzi banokukunceda ubhukishe ukhenketho lokukhenketha, izifundo zokusefa okanye…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dominical, Costa Rica